Hogaamiyaha 45aad gudaha Mareykanka Donald Trump bilaha dhamaadka sanadka 2020 go’aansaday inuu ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya
In kasta oo Mareykanku sheegay in uusan joojin doonin duqeynta Al-shabaab, haddana waxaa cudurdaar looga dhigayaa joogitaankiisa dhulka, mararka qaarna waxaa la shaqeeya ciidammada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa uu tababaray.
Xilliga ay Soomaaliya ka baxayaan ku dhowaad 1000 askari oo Mareykan ah ayaa ku soo beegantay maalin Jimco ah. Janaayo 15, 2021 Waa shan maalmood ka hor caleemo saarka Hogaamiyaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden.
Telefishanka Aljazeera yaa maqaal dheer ka qoray sheekadan bilaw ilaa dhamaad wuxuu yiri 700 isla markaana ciidamada Mareykanka ay soo galaan Soomaaliya sanad walba 2013-kii, tan iyo markaas waxay joogeen dalka, iyagoo tababaraya ciidamada kumaandooska ee howlgala.
Mareykanka wuxuu ku saleysan yahay: Xerada Xalane garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, garoonka diyaaradaha Cirka Soomaaliya Balli-doogle caasimada 100 KM, Kismaayo oo 500 – KM Xarunta Qaranka, Boosaaso Waqooyiga & Gaalkacyo iyo Bartamaha.
Mareykanku wuxuu xooga saaray tababbarka xoogag sarsare, Al-Shabab waxay bartilmaameedsataa hogaamiyaasha duqeymaha noocan oo kale ah ee la fuliyo ka hor weerarada iyo inay ka baxaan degmooyinka.
Taliska AFRICOM Wuxuu sheegay inay qiimeynayaan xaalada amni ee Soomaaliya iyo qatarta Al-Shabaab, sidaa darteedna aysan taasi micnaheedu aheyn in hadii ciidamada la geeyo ay xirayaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Maxay yihiin caqabadaha hortaagan bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya?
Waa su’aal jawaab u baahan dhowrka maalmood ama toddobaadyada soo socda ee bixitaanka ciidamada Mareykanka, mana kala cadda cidda maamusha saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay banaanka Xalane, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM.
Soomaaliya ayaa isku diyaarineysa doorasho lagu muransan yahay iyo xubnaha maamulka, xaalada amni waa ay cadahay tanina waxay keentay walaac laga qabo xasiloonida dalka.
Xoghayaha gaashaandhigga ayaa mar kale xaqiijiyey ka bixitaanka Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo sheegay in la joogo xilligii ciidamada Mareykanka laga soo saari lahaa Soomaaliya, Afghanistan iyo Ciraaq.
Mareykanka 20-sano Kadib wuxuu doonayaa inuu ciidamadiisa kala baxo duulaanka tooska ah iyo midka aan tooska ahayn, saraakiisha qaar waxay rajaynayaan inay si nabad ah guryahoodii ugu noqdaan, maadaama ay waxbadan ka barteen dagaalladii ay soo mareen oo ay ku waayeen askar & saraakiil ay wada shaqeeyeen.
Saraakiil kale oo Mareykan ah ayaa cabsi ka muujiyay in saldhigyadaas ay faarujiyaan Shiinaha, Ruushka iyo Turkiga, maadaama ay muhiim u yihiin howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Xigasho: Aljazeera / Axadle.
Basic Perrin remembers the dedication of
Manchester United v Chelsea, Bayern v